Maqaallada ku saabsan Malaysiya
Sidee shaqo looga helaa Malaysia?
November 27, 2020 Antika Kumari shaqo, Malaysia
Waa khibrad cabsi leh inaad shaqo ka raadsato Malaysia. Malaysia dhexdeeda, suuqa waa mid aad u tartamaya waxaana laga yaabaa inuu wajaho caqabado dhowr ah, oo ay ku jiraan xirfadlayaal guuleysta. Taas markii la dhaho, waxaad ogaan kartaa inay mudan tahay dadaalka. Isbarbar dhig
Fiisaha Malaysia ee Hindida
October 12, 2020 Antika Kumari Malaysia, fiisada
Qorshaha eVisa waxaa hirgelisay Dowladda Malaysia sanadkii 2017 si loogu dhiirrigeliyo codsiyada fiisaha iyo dalxiiska Malaysia. Muwaadiniinta Hindida ah waxay dalban karaan fiisada elektarooniga ah (eVisa) iyo eNTRI (Diiwaangelinta Safarka Elektiroonigga ah iyo Macluumaadka) haddii ay u hoggaansamaan
September 28, 2020 Maitri Jha Malaysia, fiisada
Dowladda Malaysia ayaa u soo bandhigtay barnaamijka e-Visa-ga dadka safarka ah inay galaan Malaysia. Socdaalayaashu waxay buuxiyaan codsi khadka tooska ah oo u sahlaya inay codsadaan fiiso ay ku galaan Malaysia. Fiisooyinka lagu soo diro emaylka ee la gaadhsiiyo codsadayaasha markay buuxiyaan ka dib
Qiimaha Nolosha Malaysiya
Waxaa laga yaabaa 15, 2020 Maitri Jha Malaysia, safarka
Malaysiya waa waddan aad u wanaagsan oo lagu noolaado, maadaama waddanku horumar ku soo maray muddooyinkii u dambeeyay. Malaysia waa meel aad looga yaqaan oo caan ku ah adduunka adduunka dalxiiskeeda xeebta. Cuntada halkan laga heli karo sidoo kale waa wax ugu fiican in la haysto.
Qiimaha Nolosha Ama Kirada Iyo Deganaanshaha Danmark
Waxaa laga yaabaa 14, 2020 Maitri Jha Malaysia, safarka
Adiga oo ku sii jeeda inaad ku noolaato Denmark, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxyaabo muhiim ah oo waddanka ku saabsan. Qiimaha nolosha Denmark ayaa qaali ah. Xitaa heerka nolosha ayaa aad uga badan inta badan koonfurta Yurub
Miyaad tahay kormeeraha safarka? Gaadiidka Dalka Malaysia.
Waxaa laga yaabaa 12, 2020 Karuna Chandna soo qaado, Malaysia
Gaadiidka ugu raqiisan Malaysia. Kaabayaasha gaadiidka ayaa ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan horumarka dal. In kasta oo Hindiya ay leedahay qayb ballaaran oo kaladuwan oo gaadiid leh qaybteeda caqabadaha ah, haddana waxaa looga gudbi karaa tamar-ku-ool ah
Magangalyada Magangalyo doonka Malaysia
Waxaa laga yaabaa 11, 2020 Maitri Jha Malaysia, qaxootiga
Malaysia ayaa xarun u ah magangalyada, maaddaama dhowr qof halkaas u tahriibaan sannad kasta. Ma rabtaa inaad ka dalbato magangalyo magangalyo Malaysia? Waxaan kugu soo lifaaqnay ilo macluumaad oo adiga kuu gaar ah oo adiga waxtar kuu yeelan kara. Fursadaha
Daryeelka Caafimaadka iyo Cisbitaalada Malaysiya.
Waxaa laga yaabaa 6, 2020 Karuna Chandna caafimaadka, Malaysia, safarka
Dadku sidoo kale waxay wajahayaan arrinta doorashada dhakhaatiirta ugu wanaagsan ee waddan shisheeye ah. Iyo waliba hay’ado kala duwan markasta oo ay timaado kharashaadka caafimaadka. Tani waa sababta oo ah Cisbitaalada gudaha Malaysiya ee loo yaqaan takhasuska qaarkood. Cisbitaalada Dalka Malaysia ayaa leh
Wax ka barta jaamacada Malaysiya
April 3, 2020 Antika Kumari Malaysia, waxbarasho
Dooro inaad wax ku barato jaamacada Malaysia waxaadna fursad uheli doontaa inaad ogaato keymaha roobkeeda, xeebteeda iwm. Buddhist iyo Hindu
Nidaamka waxbarashada ee Malaysiya
April 3, 2020 Antika Kumari Malaysia, dugsiga
Haddaad reerkaaga ula guureyso reerkaaga. Xaaladdaas, waxbarashadda carruurtaadu waa tan kuugu daran. Laakiin, nidaamka waxbarashada ee Malaysia waa heer sare. Sidoo kale, dhammaan waalidiintii hore wax waligood uma dhibtoodin